Macluumaad | Radio Himilo
Home / Macluumaad
Ahmed Haaddi Today at 7:45 am
Himilo – Muqdisho waa caasimada dalka Soomaaliya waxey ku taalaa galbeedka badweynta Hindiya. Soddon sano ka hor waxay ahaan jirtay magaalo ay u soo dalxiis tagaan dadyowga duniga, maadaama ay leedahay xadaarad iyo xeebo qurux badan oo soo jiita dadka ...
Himilo – Kuma cusba dhegaha dadka magaciisu. Muuqiisana haba sheegin. Siyaalo dhowr ah oo kala duwan ayuu uga qeyb ahaa geeddi-socodka nolosha rayidka siiba dhanka wax-barashada iyo hey’adaha. Laakiin wuxuu mar qura saaxadda caannimada iyo hadalheynta qabsaday 10 sannadood kahor. ...
Sadia Nour 4 days ago
Himilo – Waa guuxa dadweynaha soomaaliyeed ee ka dhursugaya doorashada maanta ka dhaceysa xarunta ciidamada cirka ee Afisyooni ee qabsoomideeda ay qaadatay muddo ka badan sanad iyo bar ayna hareereeyeen khilaafyo sababay gacan ka hadal. Doorashadu ma noqon doonto mid ...
Himilo – Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ku nool Muqdisho waxa ay wajahayaan dhibaatooyin ballaaran oo isugu jira kuwo dabiici ah iyo kuwo aan gacmaheenna ku kasbanay. Shacabka Muqdisho ku nool lagu qiyaaso saddex milyan oo qof ...
Himilo – Horumarka deg-degga ah oo ay ku socoto tiknoolojiyadda lagu farsameeyo taleefannada gacanta, waxa ay ku qasabtay aadanaha inay soo saaraan barnaamijyo (applications) si fudud ula jaanqaadi karo mobile-da ku shaqeeya internatka. Billawgiiba waxaa la hindisay kuwa qoraallada lagu wadaago, ...
Marxaladihii ay soo martay doorashada Soomaaliya
Himilo – Soomaaliya waxay u diyaar garowbeysaa doorasho aad u daahday oo waqti dheer qaadatay, dhib u dhaceeda wuxuu sababay qal-qal amni iyo mid siyaasadeed. Magaalada Muqdisho ayaa xilliyada qaar waxaa isaga hor imanayay wadooyinkeeda ciidamo hubeysan oo is diidan. ...
Robot la barayo sida cuntooyinka loo dhadhamiyo
Ahmed Haaddi 12 days ago
Himilo – Robot kariye ah ayaa loo tababaray dhadhaminta cuntooyinka. Hadda wuxuu awoodaa inuu sida aadanaha kala saaro. Mashiinkan waxaa sameeyay jaamacadda Cambridge University. Waxaa la sheegay inuu sheegi karo cuntada waxa ka dhiman. Robot-kan ayaa cuntada sida bani aadamka ...
Himilo – Bedir Akbulut oo u dhashay dalka Turkiga ayaa muddo 63 sanno ah aad u danaynaya inuu xirto taayga lagu xirto dharka isku-joogga ah maalin kasta, ilaa ay ka noqotay qayb ka mid ah shakhsiyadiisa. 70 jirkan wuxuu ku ...
Xog ku saabsan soonka wadaca ee bisha soon-fureed
Himilo – Waxaa dhamaaday bishii barakeysaneyd ee ramadaan. Waxaa la soo gunaanaday maalmo afxirnaan waajib ah oo la gudanayay. Cunistii, cabbidii iyo gogoshii laga soomanaa maalinkii ayay dadku dib u billaabaan marka ay ildeystaan bisha Soon-qaad. Culimada ayaa ku taliya ...